Ndeapi mabhangi akanakisa muMexico? - ALinks
Mabhangi akanakisa emaitiro ndiBanorte neSantander. Izvi zvinoreva kuti vane masevhisi ari nyore uye anokurumidza anoda zvinyorwa zvishoma. Bhangi rakanakisa revatengi vavo vanopihwa ndiBanorte. Banorte ndiro bhangi rinonyanya kuoneka rakatenderedza Mexico, kunyanya muFederal District. Iyo ine vakawanda vanogovera mari uye akawanda masangano anopa kumwe kudzikiswa kwemubhadharo.
Uchangobva kutamira kuMexico? Kunyangwe izvo zviri zvezvidzidzo kana zvebhizinesi, saka wazviwana wave kuda account yekubhangi. Kana zvakadaro, ipapo iwe uchasvika pakuziva zvese nezve banking. Takatenga zvakatenderedza Mexico uye takaisa pamwechete iyi runyorwa rwezvese zvaunoda kuziva! uye kuti uchengetedze mari yako muakaundi yebhangi munyika itsva.
Bhangi reMexico (Banco de México), ndiro bhanga guru renyika. Inotarisa kugoverwa kwemari uye misika yemari yekunze. Inoisa miganhu kumabhangi eMexico uye kudzora zvikwereti. Inoshanda sehurumende yehurumende yemari sangano. Inogadzira pesos nyowani uye imba yekuderedzwa yemabhangi ekutengesa. National Banking Commission inodzora indasitiri yemabhangi yakazvimirira. Inopawo mari muzvirongwa zvebudiriro zvehurumende. Bhanga reMexico rinofanirwa kumisa kukweretesa kwaro kuhurumende pakutanga kwegore rega rega. Bhanga guru renyika rakatanga kuzvitonga muna Kubvumbi 1994 kuitira kuti inflation ienderere mberi.
Aya mabhanga aripo kungave kuEurope, United States, Asia, kana Latin America. Iwo mabhangi epasirese, uye anokupa masevhisi akanakisa.
Saka, heino rondedzero yemabhangi anozivikanwa muMexico. Pane runyorwa rusingapere rweMabhangi aripo muUnited States Mexican.
Banco Nacional de México, SA, yakatanga muna 1884. Ine vashandi vanopfuura 37,000 1,600. Inomhanya pamusoro pematavi e7,500 uye XNUMX ATMs. Iri muEurope, North America, Western Asia, Africa, Asia, Australia, uye Latin America.
Bancomext yakatanga muna 1937. Inopa zvakasiyana-siyana zvezvigadzirwa zvemari nemasevhisi muMexico. Bhanga rinoshanda sekambani inokweretesa kunze kwenyika. Inobatsira mabhizimisi madiki nepakati ari kutengesa kunze kwenyika mumisika yekunze. Inobatsira nekubhadhara uye kukwidziridzwa. Inopa zvakare masevhisi ekupa mazano kune mabhizinesi anofarira kupinda mumusika wekunze. Iyo ine mahofisi ayo makuru muMexico City uye inoshandisa vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri.
BBVA Bancomer ndiro bhanga guru reMexico, rakatanga muna 1932. Inoshanda nehurumende, vanhu, mabhizimisi maduku nepakati, uye vatengi vemakambani. Inopa zvakasiyana-siyana zvezvigadzirwa zvemari nemasevhisi. Bhanga iri rine nzvimbo 1,800, 7,700 ATMs, uye 125,000 poindi-yekutengesa michina. Dzimbahwe rayo riri muMexico City, uko rinoshandisa vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvina. Inowanikwa muUnited States neSpain.
Banorte yakatanga muna 1899. Iri pasi peGrupo Financiero Banorte. Ndiyo yakakura kuMexico yebhangi uye masevhisi emari akabata yakasimba. Bhanga iri rine muzinda muMexico City. Inoshandisa vanhu vanosvika zviuru makumi matatu. Iyo ine network yebazi ye30,000 nzvimbo uye 1,182 maATM. Iyo zvakare ine 8,919 yechitatu-bato vatori venhau uye 6,989 poindi-ye-yekutengesa terminals. Inowanikwa muUnited States.
HSBC Mexico SA chikamu cheHSBC. Bhanga iri rine mahofisi aro makuru muGuadalajara, Mexico, uye rakatanga muna 1941. Rine vashandi vangangosvika zviuru gumi nezvitanhatu uye rine mapazi 16,000 nemaATM 971.
Santander Mexico yakatanga muna 1932. Inoshanda muzvikamu zviviri: mabhengi ekutengeserana uye mabhengi emakambani epasi rose. Bhanga rine nzvimbo 1,350, maATM 9,448, uye 2,297 nzvimbo dzekushandira vatengi. Inoshandisa vanhu vanosvika 22,300. Inowanikwa muEurope, North America, Asia / Australia & Latin America.
Vanhu uye mabhizinesi vanogona kushandisa Scotiabank kune akasiyana siyana emabhangi masevhisi. Iri rimwe remabhangi ekare muMexico. Inopa kubhengi kwemakambani uye ekudyara. Uye inobatsira nemabhengi emunhu uye ekutengesa, uye masevhisi ekutonga hupfumi. Inopa vatengi mamirioni makumi maviri nemana munyika dzinopfuura makumi mashanu. Iyo ine mahofisi ayo makuru muMexico City uye inoshandisa vanopfuura 24 vanhu. Inowanikwa muEurope, North America, Asia, Australia, uye Latin America.
Saka, enda uye utange kusevha nemabhangi akanaka akatenderedza ipapo.
Nderipi bhangi randingashandisa muUSA neMexico?
Kune mamwe mabhanga anowanikwa muMexico ane vadyidzani muAmerica zvakare. Unogona kushandisa mabhanga aya muUSA neMexico. Inotevera rondedzero yemamwe emabhangi:
Bank of America muUS ishamwari yeScotiabank muMexico.
HSBC muUS ishamwari yeHSBC Mexico.
Santander, muUS, anodyidzana naSantander Mexico.
Mangani mabhangi eMexico ari muMexico?
Parizvino, anenge makumi mana nemasere mabhanga anoshanda muMexico. Iwo makuru ndeaya BBVA Bancomer, CitiBanamex uye Santander. Banorte, HSBC, Inbursa, uye Scotia Bank zvakare makuru. Aya mabhanga manomwe anodzora zvikamu makumi manomwe nesere kubva muzana zvemugove wemusika mumidziyo yese. Iyo Mexican commercial banking sector yakavhurika kumakwikwi epasirese. Anenge ese mabhanga makuru, kunze kweBanorte, ari pasi pehutongi hwemabhanga ekunze.
Mufananidzo webutiro uri kumwe kuCabo San Lucas, Mexico. Mufananidzo na PoloX Hernandez on Unsplash
Yakawanda Sei Mari Yemutero Imbairo kuMexico?
Rondedzero yemabhangi muKazakhstan
Nzira yekuvhura sei bank account muAlbania?
Nzira yekuvhura account muSwitzerland bank? Mabhangi akanakisa muSwitzerland
Nzira yekuwana sei basa muMexico?